China Vibration moto rụpụta na Factory | Akụrụngwa Chengxin
Ejiri ntọala eccentric a na-edozi na nsọtụ abụọ nke rotor rotor, a na-enwetakwa ike na-akpali akpali site na iji ike centrifugal nke ntụgharị ọsọ ọsọ nke osisi ahụ na oghere eccentric mepụtara. Ugboro ugboro nke ịma jijiji dị ukwuu, ma igwe arụ ọrụ nwere ike belata ma ọ bụrụ na ike na ike na-atọ ụtọ dabara nke ọma. Enwere ụdị moto vibration isii, dịka ịmalite na ọnọdụ ịgba ọsọ, ọsọ ọsọ na ihe ndị ọzọ.
Igwe vibration bụ ihe na-akpali akpali nke na-agwakọta isi iyi na isi mmalite. A na-etinye usoro nke ikuku eccentric a na-emegharị na nsọtụ abụọ nke rotor rotor, a na-enwetakwa ike na-akpali akpali site na ike ikuku na-agba ọsọ site na ntụgharị ọsọ ọsọ nke ogwe na eccentric block. Igwe vibration nwere uru dị elu nke ike na-akpali akpali, ike oriri dị ala, obere mkpọtụ na ndụ ogologo ndụ. Enwere ike ịgbanwe steepụ ike na-akpali akpali nke ịma jijiji, ọ dịkwa mfe iji. Igwe vibration nke xjd, jzo, YZU, VB, XVM, yzo, YZS, YZD, TZD, tzdc na ụdị ndị ọzọ nke vibration bụ motọ vibration zuru ụwa ọnụ. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ izugbe, dị ka: vibration crusher, vibration screening machine, vibration packer, vibration shaker, vibration ịkpụzi igwe, vibration ikpo ọkwọ, vibration ndoli, vibration ndochi igwe, vibration njiko agbaji mgbochi igbochi ngwaọrụ nke silo, wdg A na-ejikarị ya eme ihe na hydropower construction, thermal power generation, ihe owuwu, ihe ụlọ, ụlọ ọrụ kemịkal, Ngwuputa, kol, metallurgy, ụlọ ọrụ ọkụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
1. Ọ bụrụ na ike na-akpali akpali na ike dakọtara nke ọma, ike ịma jijiji buru ibu, ibu ahụ dị ọkụ, olu ya pere mpe, mkpọtụ igwe dịkwa ntakịrị.
2. N'ihi na moto ọma jijiji bụ ịma jijiji na-eguzogide siri ike karịa ụda olu, ọ nwere njupụta kwụsiri ike.
3. Ogologo oge vibration buru ibu. A na-edozi oge vibration nke electromagnetic vibration exciter, nke n'ozuzu ya na ogo ike ọkọnọ ike, ebe a na-emegharị ugboro ugboro nke igwe vibration n'ọtụtụ dịgasị iche site na ịhazigharị ọsọ, na oge ịma jijiji na njupụta nwere ike ịbụ ejiri aka ha họrọ dịka ụzọ dị iche iche si dị.
4. N'ihi ngbanwe nke ike ọkụ, electromagnetic vibration exciter ga-agbanwe ike na-akpali akpali nke ukwuu n'ihi mgbanwe volta, mana ngbanwe a dị obere na igwe vibration.
5. Multi igwe Nchikota nwere ike na-aghọta onwe mmekọrịta na mezue dị iche iche usoro chọrọ.
6. a pụrụ ịgbanwe nduzi nke ike na-akpali akpali dịka ọnọdụ ntinye nke moto vibration si dị.
7. na-akpali akpali ike na njupụta nwere ike gbanwee steplessly naanị site ukpụhọde n'akuku nke eccentric ngọngọ.
8. Mmezi dị mfe. Ebe ọ bụ na anaghị eji mmiri ahụ eme ihe dị ka ụdị electromagnetic, a ga-ezere ọrụ mmezi dị ka mmezi nhazi na nhazigharị ibu, ọ ga-abụkwa na mmezi ahụ chọrọ mmezi oge niile.
Nke gara aga: Efere efere
Bọmbụ gbawara agbawa-Gosiri Vibration Motor
Motor vibration feed
Mgbapu Tzd Vibration
Ndị na-emepụta moto ọma jijiji
Ọnụahịa Mgbaji jijiji
Yzo ọma jijiji Motor
Igwe Ntughari Yzs
Zdj ọma jijiji Motor